Iyo Commodore Amiga komputa yaive pamberi penguva yayo mune zvakawanda zvine chekuita payakatangisa. Chimwe chikamu chegadziriro yacho yaive mbeva yaidzorwa Amiga Workbench, graphical user interface iyo yakapa vashandisi veAmiga ine interface yakafanana neyemazuva ano yekushandisa system interfaces.
Dhaunirodha yazvino vhezheni yechishandiso kubva ku yakabatana neGoogle Drive webhusaiti uye mhanyisa iyo yekuisa kuti uiwedzere kune sisitimu. Windows SmartScreen inogona kuratidza yambiro pakuita, nekuti inyowani uye haishandiswe zvakanyanya. Iyo purogiramu inowanikwa chete Windows panguva yekunyora.
Iyo purogiramu inowedzera kuvhara kune iyo Windows desktop inotaridzika seyemazuva ano vhezheni yeAmiga Workbench. Zvese zvidhori zvedesktop zvinoramba zviripo, asi bhara rebasa rinotsiviwa uye iwe uchaona kuti mamwe mabasa epakati achinja. MyWorkbench haisi Amiga emulator; haugone kushandisa chirongwa kuvhura Amiga application, semuenzaniso kubva kuADF mafaera. An Amiga emulator, WinUAE kana vamwe, vanosungirwa kumhanyisa Amiga mitambo nemaapps pa Windows makemikari.
Unogona kubuda iyo interface mukona yekumusoro kuruboshwe. Bata pasi bhatani rekurudyi uye sarudza Rega sarudzo kuti udaro.
chitsamba: iyo application inoshandura mbeva pointer maitiro, uye haina kudzoreredza iyo Windows default style pakubuda. Yadzorerwa
Kana iwe wakamboshandisa iyo Amiga Workbench kare, iwe uchanzwa uri kumba chaiko. Windows vashandisi vasina, vachada imwe nguva yekugadzirisa kune akasiyana mafambiro ebasa.
MyWorkbench inosanganisira akati wandei maturusi anogona kumhanya; izvi zvinosanganisira vatambi venhau pakati pevamwe. Iyo mimhanzi inoridza inotsigira mods pakati pemamwe mafomati, asi isina barebones kana ichienzaniswa Windows vatambi vemimhanzi vakaita seAIMP kana kunyange Winamp. Regular Windows mapurogiramu anogona kutangwa kubva kune interface. Desktop icons uye taskbar icons zvinopihwa kuti zvitange izvi.
MyWorkbench inounza iyo Amiga Workbench chiitiko kune Windows zvishandiso. Iyo app inopa chiitiko chinonakidza, asi chinoshaya hukuru hwekuita, sekugona kumhanya Amiga zvirongwa nemitambo, uchiishandisa. Parizvino, vashandisi vangangoda kushandisa Amiga emulators kune izvo, chero vachikwanisa kuwana Kickstarter ROM, inodiwa kushandisa emulators aya.
7 Nzira dzeTweak Yako Windows 10 Taskbar
Windows 10 Bharaki harivanze? Heano kugadzirisa!
Iwo Akanakisa Mutambo Mbeva dza2022